Qiyaasta Keywordka Google | Martech Zone
Tilmaanta Keyword ee Google
Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
18-keedii, Google waxay sheegtay inay bilaabayaan inay qariyaan ereyada muhiimka ah ee ay adeegsadaan dadka ku jira akoonnada google (Gmail, Youtube, Google+, iwm). Si xiiso leh, magaca gaarka ah, Google waxay kaliya ku samayn doontaa tan natiijooyinka raadinta dabiiciga ah. Fikradayda, taasi waa BS tanina waxay umuuqataa mid iska caadi ah xun ku dhaqaaq buugayga. Waqti badan oo ay Google ku bixinayso waxbarista warshadaha raadinta sida ugu wanaagsan ee loo soo bandhigi karo waxyaabaha ay ka kooban tahay isla markaana loogu darayo ereyada muhiimka ah, qarinta xogta dabiiciga ah sidan oo kale waxay umuuqataa wax la xaqiro.
Haddii ay doorteen inay ku qariyaan raadinta lacagta la siiyay iyo sidoo kale meeleynta xayeysiisyada lacag bixinta, waa laga yaabaa inaan oggolaado. Google miyuu qarinayaa ereyada muhiimka ah inta udhaxeysa waxyaabaha u gaarka ah? Waa hagaag, maya… kuwani waa hantidooda sidaa darteed ma xisaabtami karo. Waxay si fudud uga qarinaysaa qof kasta oo kale oo muhiim ah. Xogta hoose ee ka socota Lifaaqmedia, wuxuu sharaxayaa faa iidooyinka iyo qasaaraha ay leedahay tallaabada
Hal qoraal oo ku saabsan tan. Google waxay rajeyneysaa in tani ay saameyn ku yeelan doonto 10% ka mid ah Analytics natiijooyinka keyword. Waxayna u muuqataa inay wali awood u siinayaan adeegsiga ereyada muhiimka ah gudaha Raadinta Raadinta Google… hadda.
12 Wadiiqo Abuur Mawduuc Hal abuur leh
Oktoobar 30, 2011 at 8:13 PM
Nacalad, markaa maxaan samayn karnaa lataliye SEO ah markaan haysanno xog!
Oktoobar 30, 2011 at 8:57 PM
Su'aal wanaagsan, Myindustry! Hadda, waad sii wadi kartaa inaad ku tiirsanaato Webmasters-ka… laakiin awood u lahaanshaha inaad isku xirto dhibcaha u dhexeeya erayga saxda ah ee saxda ah iyo beddelaadku suurtagal maahan… kaliya suurtagalnimada loo qoondeeyey. Ama isticmaal hoosaadka martida ee aan soo galin.
In Xalka Webka Guriga
Jan 31, 2012 saacadu markay ahayd 5:15 PM
Weli waad isticmaali kartaa barnaamij sida seomoz si aad uhesho qaar ka mid ah xogtaan iyo suurto gal Alexa.
Jan 31, 2012 saacadu markay ahayd 5:13 PM
Oh waaw! Tani runtii way nuugtaa. Waxaan la yaabi jiray sababta keywords keyword badan aanan loo siinin baaritaankeyga dabiiciga ah ee falanqaynta. Tani dhab ahaantii waa mid wax soo saar leh. Runtii waan jeclahay jaantuska la abuuray wuxuu dadka ka caawiyaa inay sidan si ka sii fiican u fahmaan!